VANTAGE Daraasadaha Xirfadeed ee Sare | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Barnaamijkan gaarka ah, ardaydu waxay la shaqeeyaan kooxda mashruuca si ay u xalliyaan dhibaatooyinka adduunka ka jira oo ay wax uga bartaan caqabadaha shaqada mashruuca wadata. Iyada oo la raacayo jihada macalin shati leh iyo iyada oo lala kaashanayo xirfadleyda, kooxahan mashruucu waxay ku dadaalayaan inay gacan ka geystaan mashruuc ay iskaashigu qeexey halka ay ka helayaan khibrad qiimo weyn ku leh suuqa maanta.
Iyadoo la shaqeyneysa la-hawlgalayaasha maxalliga ah, macallimiinta Minnetonka waxay beddelayaan waayo-aragnimada dugsiga sare. Iyada oo aasaasi u ah fikradaha lagu baray koorsooyinka dhaqameed, kuwa loo baahan yahay iyo kuwa xulashada ah, manhajka mashruucu ku saleysan yahay wuxuu ka hadlayaa farqiga u dhexeeya shaqooyinka ka jira deegaannada hadda jira, u diyaarinta ardayda maanta xirfadaha sare, ee shaqooyinka sare.
Barnaamijkan wuxuu ardayda u soo bandhigaa ardayda dugsiga sare ee dhiirigalinta siinaya danaha mustaqbalka ee shaqada ka hor intaadan codsan kulliyadaha (iyo kadib bixinta lacagta waxbarashada).
Ardaydeenu waxay fursad u helaan inay la xiriiraan hoggaamiyeyaasha ganacsatada maxalliga ah, la-taliyayaal hoos yimaada macallimiin waayo-aragnimo leh, oo ay u helaan khibrad gacan-ka-qabasho xagga goos goos ah.
Wada-hawlgalayaashayadu waxay ka faa'iideystaan cilaaqaadka ay la yeeshaan dhalinyaradaan sababtoo ah soo-saarista hal-abuurka iyo xamaasadda leh mashruuca hadda jira, iyo sidoo kale horumarinta shaqaalahooda mustaqbalka.